भूपेन्द्र आचार्य, काठमाडौं, २ बैशाख । दर्जनौं बैंक तथा वित्तीय संस्थाभित्र भएका सयौं घटनालाई छानबिनको घेराउमा नल्याएका कांग्रेसी गभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपाललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगाएर पदमुक्त गरिने भएको छ ।
डा. नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएपछि एनबी बैंकको प्रसाई कर्जा घोटाला काण्ड, बैंक अफ काठमाडौंको मेलम्ची घोटाला काण्ड, हिमालयन बैंकको मेलम्ची र फूलको कम्पनीलाई दिएको कर्जा दुरुपयोग काण्ड, काष्ठमण्डप विकास बैंकको कर्जा दुरुपयोग काण्ड, कुमारी बैंकको मिराकल–१० खरिद घोटाला काण्ड, तत्कालीन किष्ट बैंक र ग्राण्ड बैंकको सयौं कर्जा दुरुपयोग काण्डका हजारौं छानबिनमा पुगेका फाइल राष्ट्र बैंकभित्रै हराएपछि यी र यस्ता केसलाई हतियार बनाएर डा. नेपाललाई अख्तियारले छानबिन सुरु गरेको स्रोतको दाबी छ ।
समाचार स्रोत भन्दछ– केही दिन अगाडि गभर्नर डा. नेपालविरुद्ध छानबिन गरी पाऊँ भन्दै वामपन्थी सरकारकै एउटा समूहले अख्तियारमा उजुरी दर्ता गरेको छ । सो उजुरीमाथि टेकेर छानबिनकै आधार बनाउँदै अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ ।
यदि उनीविरुद्ध छानबिनको नाममा पक्राउ गरी मुद्दा दर्ता गरिए उनको गभर्नर पद स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
‘गभर्नर डा. नेपाल भएपछि पूँजी वृद्धिको नाममा शेयर बजार तहसनहस भएको, कर्जा ब्याजदर बढेर १७÷१८ प्रतिशतमाथि पुगेको र छानबिन गरी कारबाही गरिनुपर्ने कयौं बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बचाउने काम गरेको आरोप लागेको छ ।
१४ महिनासम्म गभर्नर डा. नेपालले रोकेको एपेक्स विकास बैंक घाटाला काण्ड अख्तियार र सीआईबीको दबाबका कारण छानबिन भएको थियो । जनताको डिपोजिटबाट जम्मा भएको दुई अर्ब बढी पैसा घोटाला भएको घटना बाहिर आएपछि गभर्नर डा. नेपालमाथि आशंका उत्पन्न भएको देखिन्छ ।
वामपन्थी सरकारले गभर्नर डा. नेपालको करिब दुई वर्ष कार्यकालमा पैसामा हस्ताक्षर गर्ने बाहेक केही प्रगति नभएको, शेयर बजार र बैंक तथा वित्तीय संस्था तहसनहस भएको निश्कर्ष निकालेको स्रोतको दाबी छ ।
राष्ट्र बैंक उच्च स्रोत भन्दछ, ‘हाम्रा गभर्नरले प्रभु ग्रुप र आईएमई ग्रुपलगायत हिमालयन बैंक र एनबी बैंकलाई सबैकुरा गर्न छुट दिएका छन् । उनीहरूको शाखा देशविदेशमा उद्घाटन गर्नुसम्म पुगेका छन् । यसले प्रष्टै भएको छ कि उनी विभिन्न ठाउँमा पुगेका मात्रै छैनन्, आर्थिक लेनदेन समेत गरेका छन् ।’
समाचार सूत्रका अनुसार गभर्नर डा. नेपालको दुई वर्ष रमाइलो गर्दागर्दै बितेको छ । आईएमई ग्रुप पेवाजस्तै बनेका छन्, गभर्नर ।
उनी गभर्नर बनेपछि यी समूहका बैंकहरूलाई कारबाहीको त कुरै छाडौं, स्थलगत परीक्षण पनि भएको छैन ।
स्मरणीय रहोस्, डा. चिरन्जीवी नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएपछि कांग्रेसी बैंक र बैंकरहरूलाई काखी च्याप्ने कामबाहेक केही गरेनन् । पूँजी वृद्धिको नाममा र कर्जा प्रवाहकै कारण बजारमा चर्को तरलता अभाव भएको छ भने शेयर बजार तहसनहस भएको छ । राजतिलकका साथमा ।